WOWOW Naa Nickel Bathroom Faucet Centerset
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Naa Nickel Bathroom Faucet Centerset
gosiri 4.91 nke 5 dabeere na 35 ahịa Fim
(35 ahịa reviews)
Uclọ ịsa ahụ Fucet Brushed Nickel nke WOWOW dị ọnụ ahịa. Ngwa dị elu nwere ụdị ọgbara ọhụrụ. Zụọ ụlọ ịsa ahụ Maka ụlọ ịwụ ahụ Faucet Brushed Nickel ugbu a!
Ntụziaka nwụnye 2321200
Ime ụlọ ịsa ahụ batrị mechiri emechi 2321200
You dị njikere ịke ma ọ bụ zighachi ime ụlọ ịwụ ahụ? Na WOWOW anyị kwenyere na ịmebe ma ọ bụ imezigharị ụlọ ịsa ahụ gị nwere ihe ndị kachasị mma maka ịrụ ọrụ kachasị mma. Ma na nke a kwesiri ịdị ọnụ maka onye ọ bụla. Rate chọọ ụlọ ịsa ahụ mma ma ọ bụ chọọgharị ya ọtụtụ oge abụghị ihe dị ọnụ ala. Maka ebumnuche mmefu ego ma ọ bụ ihe ndọghachi azụ na-enweghị atụ, mmadụ nwere ike na-achọ isi mmiri dị ọnụ ala n'ihi na anaghị emefu ego. Na WOWOW anyị ghọtara nke a, yabụ m na-eme ka o kwe omume ịzụta isi iyi azụmaahịa na ọnụahịa dị ala. Nke ahụ ọ dị ka ekwe ekwe? Ọbụghị mgbe ị gụrụ gbasara anyị na ngwa ahịa anyị.
WOWOW bụ ihe ohuru ohuru, nke na-ewepụta ezigbo ihe ọkpụrụkpụ ihe eji emepụta mmiri. Iji kwado ụdị atụmatụ na ụdị dị iche iche, WOWOW a na-enyekarị nhọrọ dị mma nke ọkpọ mmiri iji kwekọọ na mkpa nke ndị ahịa anyị niile. Dịkwa ka ị pụrụ ịhụ na pọịfoliyo WOWOW, anyị goro ndị na-eme atụmatụ kachasị mma ka ha na-enye gị akụrụngwa ịsa ahụ nke ga-adaba na akwụkwọ akụkọ ọ bụla. Anyị kwenyere na WOWOW na-enye gị ọnụahịa kachasị mma nke dị n'ahịa n'ahịa anyị eji eji akwa mmiri, ngwaahịa dị elu, ma na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Nkịtị ụlọ ịsa ahụ nke ụlọ mposi
Igwe mmiri pọpụl mmiri oge gboo ma bụrụkwa nke dị ugbu a, nke WOWOW nwere njikwa mmiri abụọ, otu maka mmiri ọkụ na otu maka mmiri oyi. Ihe osise a na-eme ka ime ụlọ ịwụ ahụ nwee mmetụ pụrụ iche. Dịka ị nwere ike ịma, mmiri ịsa ahụ bụ ebe a na-elekwasị anya n'okirikiri, ọ bụ ezie na ha bụ ihe kachasị dị n'ụlọ ịsa ahụ. Maka nke a ị ga - enwe ike inye aka na ụlọ ịsa ahụ gị ọfụma pụrụ iche, na ịghara imegidi na arụmọrụ yana mma. Nicklọ ịsa ahụ a na-eji sọlfọ a na-eji mmanụ a isụ arụ dị mfe ijikọ ya na ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ nke WOWOW ndị dị n'otu ụdị ma gwụsịa dị ka ụlọ ịsa ahụ a na-eji amị ọla ọcha.
Emechara nzere nickel bụ nke ejiri nickel kpuchie ya site na iji waya waya. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara ụlọ ịsa ahụ a na-eji amị amị amachasị emeela ka ọ nwee ọdịdị mara mma. Igwe a na-enye nickel achara na-eme ka ime ụlọ ịwụ ahụ nwee ụda na-ekpo ọkụ na ụda pụrụ iche. Na mgbakwunye, ọ na -emepụta anya pụrụ iche na ngbanwe ya nke ìhè na ndo dị n’elu mmiri ịsa ahụ. N'ihi njiri mara ya WOWOW ụlọ ịsa ahụ na-asa anwụrụ ọkụ agaghị anọ n'ime ụlọ nkwari akụ ise ma ọ bụ ụlọ ọpụrụiche ọ bụla.
Ngwunye ụlọ ịsa ahụ ụlọ klas mbụ
Ga-achọpụta ngwa ngwa ụlọ ịsa-ahụ nke ụlọ ịsa ahụ mgbe ịnwere ya n’aka. Ọ dịghị ihe na-ewute karịa ịwụnye akwa mmiri ịsa ahụ ọhụrụ nke na-amalite ịda mgbe obere oge gasịrị. Thisda a na-agbada nwere ike ime ka ị daa mba, ọkachasị n’abalị. Mgbe ahụ enwere mgbe ọ bụla enweghị ngwọta ọzọ karịa dochie akwa mmiri ịsa ahụ gị. Nke ahụ nwere ike ịbụ ihe omume dị ọnụ, ọnụ ụlọ ịsa ahụ gị nke dị ọnụ ala wee bụrụ nke na-adịghị ọnụ ala n'ikpeazụ. Na WOWOW ị ga-amụta n'aka nke ọzọ na ngwaahịa dị elu anaghị adịcha mkpa ịpụta oke ọnụ ahịa. WOWOW gosipụtara na ị nwere ike inweta ogo dị elu na ọnụahịa dị ọnụ ala. Igwe a na-ahụ maka ụlọ ịsa ahụ na-acha aja aja na-enye nnukwu ọla kọpa, shei nke igwe anaghị agba nchara na ụlọ na-adịgide adịgide. Anwụ ngwa ngwa bụ ebumnuche bụ isi mgbe emere ụlọ ịsa ahụ na mmanụ ikuku WOWOW. Nke ahụ bụ ihe ị ga-achọpụta ozugbo.
A na-eji ọla kọpa rụọ ime ọ bụla nke ụlọ ịsa ahụ WOWOW. Igwe a na-ahụ maka ịsa ahụ nke ejiri aka rụọ abụghị maka cUPC- na ndị NSF 61 nwere akara. Ngwunye mmiri nke ụlọ ịsa ahụ na-agba agba nke WOWOW nwere mmiri iyi na-agbanwe agbanwe. Na mgbakwunye, ị gaghị ahụ mkpụrụ mbipụta mkpịsị aka ọ bụla n'elu ime ụlọ ịsa ahụ. Ọ dị mfe ịsacha ma yabụ dị mfe ilekọta. N'ụzọ dị otu a, ị ga - enweta akwa ịsa ahụ ụlọ nickel na - acha ọcha ruo ogologo oge.
Na-eri ụlọ ịsa ahụ na-agba mmanụ ikuku
WWEOW nke ụlọ ịsa ahụ nke ikuku WOWOW rụchara aha ọma na steeti nka iji nye gị ọmarịcha oge na ntachi obi. Ihe a niile bụ maka ọnụ ọnụ ala. Nke kachasị, ABS-onye na-akwalite gị na-azọpụta gị mmiri 50%, yabụ ị ga-ahụ nke a na ụgwọ mmiri gị. WOWOW na-enyere gị aka ịchekwa n'ọtụtụ ụzọ.
Ewezuga ọnụahịa mara mma na njiri mmiri na-azọpụta mmiri, ụlọ ịsa ahụ a na-eji sọlfọ brushed dị mma dịkwa mfe ịwụnye. Enwere ike itinye akwa mmiri ụlọ ịsa ahụ a dị sentimita 4 n'ogologo n'ime ụlọ ịsa ahụ nwere oghere nwere oghere atọ. Igwe mmiri ịsa ahụ a na-eji eme ụlọ ịyị ọyịsị mara mma gụnyere nke ọma. Ihe ndị a na-etinye wụnye yana faucet. Enwere ike itinye sọlfọ a na-eji mmanụ a bathroomụ arụ ụlọ nke ịsa ahụ ngwa ngwa site na ntuziaka ntinye doro anya. Ọ bụrụgodị na ị bụghị ọkachamara. N'ụzọ dị otu a, ị ga - echekwa ụgwọ ndị ọzọ.
Mbupu n'efu na ụgwọ ụbọchị iri itoolu
Dị ka WOWOW na-anọchite anya ngwaahịa ya ma kwenyesie ike na ọ ga-enweta mmiri pọmpụ, a na-enye oge mkpuchi afọ 3 na ụlọ ịsa ahụ a na-asa ahụ. Ọ bụrụ n ’ụlọ ịsa ahụ anwụrụ ikuku nke WOWOW agaghị arụ ọrụ dịka ekwere gị nkwa, ị ga-enweta klọọkụ ọmalịcha ohuru nke ụlọ ịsa ahụ enweghị nsogbu ọ bụla.
Na mgbakwunye, WOWOW na-enye gị nkwa nkwado 90-ụbọchị ego azụ nkwa. Mgbe ị chere na anyị ewetaghị gị ihe anyị nyere, ịnwere ike izighachite anyị ụlọ ịsa ahụ gị n’enweghị ajụjụ ọ bụla jụrụ. WOWOW na-emezu nkwa ya, ọ bụrụ na ịnweghị ụdị mmetụta ahụ, anyị ga-ebu ọrụ anyị maka nke ahụ. Ozugbo anyị nwetara ụdọ mmiri mgbịsịsịsịsịsịị ọla nke ịsa ahụ dị, ị ga-enweta ego gị ozugbo!
Dị ka ọ dị na ngwaahịa niile nke WOWOW, a ga-ebuga ya ụlọ ịsa ahụ a na-akwụghị ụgwọ ọ bụla na ụwa n'efu. WOWOW nwere ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ na ha niile nwere ekele maka ịdị mma WOWOW kwesịrị inye. Anyị ga-achọ ka ị nwalee ngwa ahịa anyị. Anyị kwenyesiri ike na ị gaghị achọ ịgbanwe na fuuzite ọzọ.
Uru nke ime ụlọ ịwụ ahụ Faịchasị Bịlịkọn Nickel n’uche:
 Omuma klaasị ma dị ugbu a
Nick Emechara emechi nickel
Uc uclọ mmiri ịsa ahụ dị elu
Of Ihe eji eme ezigbo ihe
Warranty akwụkwọ ikike afọ 3
SKU: 2321200 Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: 4 inch, Nickel azọrọ, Aka Iche
9 x 2.2 x 5.1 sentimita
NSF seramiiki diski valvụ, mix mmiri, 3-oghere 4 na. Centerset imewe, mfe iji wụnye
Zinc alloy / Igwe anaghị agba nchara / Brass
Deck n'ịnyịnya, 3 oghere echichi 4 inch centre
3.7 sentimita asatọ
5 sentimita asatọ
Aka ekpe na aka nri
Ihe ndozi zinc
Mmiri ọkụ na mmiri oyi dị iche iche na-achịkwa
Achịkwa mmiri na mmiri ọkụ
Foset * 1, Nwụnye nkọwapụta * 1, Pop-up Drain Stopper * 1
Kpọmkwem sinks m chọrọ. Gara ụlọ ahịa ole na ole ma ahụghị ihe ọ bụla masịrị m. Nke a bụ nnọọ mfe iji wụnye, na-abịa na ihe niile ị chọrọ gụnyere sooks Mgbakwụnye na igbapu. Mfe dị ọcha, jidere ụmụ nke ọma, enweghị ike ịjụ maka ọzọ.
Nke a bụ ọmarịcha ụgbọ mmiri mara mma nke bịara na ọtụtụ akụkụ anyị chọrọ karịa ka anyị tụrụ anya ya. Anyị na-enweghị na-aga ụlọ ahịa ịzụta n'okpuru sink akụkụ na mgbe ụfọdụ adịghị abịa na a ọkpọkọ. Anyị nwekwara ekele maka ọnụahịa nke ihe a. Ọ dị anyị ka anyị nwere ezigbo ahịa.
M zụtara a na-achọ ihe pụtara ọnụ. O juru m anya otú ọ dị arọ ma dị elu dị ka ọ na-adị mgbe m meghere ya. Ha na-ele anya nke ọma, na otu akụkụ dị nta nke ọnụ ahịa ndị na-eduga.
o were m awa 2 ka m wunye ọkpọkọ pọpụl ochie abụọ. Onye a ka emebere nke ọma, ọ bụghị naanị na m nwere ike iwunye ya na ~ 10 min, kamakwa ekwenyere m na m nwere ike ịwụnye ya na erughị 15 min mgbe ọ dị mkpa n’ọdịnihu. M na-eche n'ezie ihe kpatara eji mepụta faucets ochie iji sie ike iwepụ.
Obi dị m ezigbo ụtọ na mmiri mmiri a. Ọ dị arọ, ejiri aka dị mma, mmiri dị mma ma bụrụ ọkpọka mara mma. M bụ leary, bụghị a ahụkarị ika na m na-ahụ byt m masịrị. Ga-azụta akara a ọzọ.
Igwe mmiri na-asa ahụ na-awụ awụ. Ejikọtara ihe niile iji mee ka nrụnye dị mfe. Hụ n'anya n'anya na mmetụta nke ọkpọkọ mmiri ọhụụ m!
Nke a foset bụ kpọmkwem ihe m na-achọ mgbe na-eme atụmatụ ụlọ ịsa ahụ remodels. M hụrụ ya n'anya nke ukwuu maka nna anyị ukwu bat na m zụtara ya ọzọ maka isi. Ya sleek na nkecha. Gụnyere ọnụahịa ahụ ziri ezi. Karịrị ihe m tụrụ anya ya
Ngwaahịa magburu onwe ya, dị ezigbo mma ma dịkwa mfe ịwụnye. Nkwakọ ngwaahịa dị ukwuu, na-echebe ngwaahịa ahụ. Enwere m mmasị na ọkpọkọ ọkwa dị elu ka ị nwee ike nweta aka gị n'okpuru. Ezigbo mma, rụchara nke ọma.
Ọmarịcha ọkpọkọ mara mma yana nkwanye ugwu ọ jiri xame. Ihe nkpuchi a kpara akpa, ogologo (20 ″ gbakwunyere) na oke oru di oke nma, igbapu ahu bukwara aka!
Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta a, ọkpọkọ ahụ dị oke mma ma nwee mmetụta siri ike maka ọnụahịa ahụ. N'elu nke ahụ, ị ​​ga-enwetakwa eriri ndị na-agbanwe agbanwe bụ ndị siri ike ... '' nke ahụ abụghị ihe niile, ị na-enweta valvụ mmapụta nke ụdị nke ọ dị mfe itinye, dị mfe iji ma dịkwa mma. Ọ dịghị akwa ụta.
Anyị hụrụ pipụ a n'anya. Ọ bịara zuru oke na drain na akwa akwa maka nko mmiri. Aga m agha ịtụ ngwaahịa a ọzọ
Nke a mara mma ma dịkwa mfe ịwụnye ngwugwu. Ọ na-abịa na ihe niile ị chọrọ iji wụnye. Were naanị nkeji ole na ole iji wụnye ọ na-ese ma na-arụ ọrụ dị ukwuu. Aga m azụta ọzọ.
Ebe ọ bụ na ọkpọkọ lavatory dị ugbu a ga-emechi nso na tebụl ahụ wee gbapụ mmiri site na nsị ahụ. Azụrụ m mpempe a. Ha dị ezigbo mma karịa ihe batara na ogige anyị ma ọ ga-adaba adaba maka ụlọ anyị. Obi dị m ụtọ na nzụta a.
Mara mma na nnukwu ọnụahịa. Mfe aka. Hụ valvụ push ahụ. Amaghi kwa banyere ya.
Igwe mmiri a na-arụ ọrụ nke ukwuu ma na ọnụ ahịa ka mma karịa ụlọ ahịa ọ bụla dị m nso. Ọ dị mfe ịwụnye ma mara mma.
Obi dị m ụtọ ịchọta nke a na nnukwu ego. Ogo jikọtara ọnụahịa mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ime ụlọ ịwụ nwa anyị.
Ọ bụrụ na m nwere ike iri ari na mmiri m na-eche ike n'azụ pọmpụ a, m ga-. Ọ na-adị m ka aka m na-eme baptism oge ọbụla mmiri si na Chineke a zitere ha.
Anyị arụnyere 2 nke ọnwa abụọ a gara aga ..
Ha dị egwu! Ha dị ezigbo mma na uru dị egwu !!
Azụrụ m ụzọ atọ nke ọkpọkọ ọkpọ mmiri ndị a. M gaara emefu okpukpu abụọ mana enweghị ya na mmefu ego m. Ndị a dị ezigbo mma ma dị mma. Enwere m ọkachamara na-arụ ọrụ ọkachamara na ọ sịrị na ha bụ otu n'ime usoro kachasị mma ọ hụworo. Ga-akwado.
Ejiri m ndị a iji kwalite ụlọ ịsa ahụ m. Ha dị mfe iji wụnye ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ na-amasị m ka ha si arụ ọrụ nke ọma
Best ụlọ ịwụ ahụ foset m zụrụ! Ọnụ ego dị egwu, mfe wụnye ụdị nkecha, na-arụ ọrụ dị ukwuu!
nnukwu ngwaahịa. ma ọ bụrụ na mkpa ọzọ mgbe e mesịrị maa ga-azụta ọzọ na arụnyere na ya lookin ukwuu.
Nnukwu foset gbanwere maka ime ụlọ ịwụ. Mfe wụnye, na-arụ ọrụ na-enweghị ndọghachi azụ. Na-achọ ịzụta yiri maka ụlọ ịsa ahụ dị n'elu.
Agaghị m azụta ihe ọ bụla ọzọ iji dochie pọpụ mmiri m. Ọmarịcha anya. Ezigbo uru.
Ogo na uru bara uru # 1 na ihe a. Super dị mfe ịwụnye na ihe niile ịchọrọ maka ịwụnye dị na igbe. Nweghị ike iti ebe ahụ ọ bụla ọzọ.
Anyị zụtara 3 n'ime ndị a maka ụlọ ịsa ahụ anyị. Ahụrụ m ihe mgbochi mmiri n'anya. Ọ bụ bọtịnụ vs a screw on thing. Ọ na-eme ka ọ dị ọcha karịa ma dị mfe iji. Na mkpokọta, sleek na vasatail imewe.
Awụnyere n'ihe dị ka nkeji 30. Nweta nkwalite site na nke ochie ma ọ bụ ihe dị mma ime ka ụlọ ịsa ahụ anyị dị ọhụrụ
N'anya styling na leghaara nickel imecha. Mfe iji wụnye. Enwere m ime ụlọ ịwụ atọ na enwere m pọmpụ a n'ime ha niile.
Zụrụ ihe a iji dochie anya mmiri ochie na ụlọ ịsa ahụ dị n'okpuru ala. Ọ bịara na ihe niile m chọrọ maka ọrụ ahụ. Ọ masịrị m nke ọma nke a foset.
ezigbo Ngwaahịa! O juru m anya etu esi eme ya. Aga m azụta ụlọ ọzọ maka ime ụlọ ịwụ ọzọ.
M gbanwere ma ukwu bath facets na ọ bụ ikuku. Mfe iji wụnye na ha anya ezigbo ezigbo na na price m ga-agbanwe ndị ọzọ na ime ụlọ ịwụ dị ka mma.
Ọ dị mfe ịwụnye, nke oge a, na ọnụ ala. Na-ele anya dị egwu na ọkara ụlọ ịsa ahụ m.
Nnukwu uru dị oke ọnụ ma na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ezigbo uru maka ego m ga-akwado nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọkpọkọ mmiri ọhụụ ma ọ bụ na-ele anya
*** *** h2020-07-20
Anyị chọrọ pọmpụ mmiri iji jikọta ịsa ahụ anyị na ụlọ ahịa anyị enweghị ihe anyị masịrị anyị. Igwe mmiri a na-arụ ọrụ zuru oke! Mfe ịwụnye na ọdịdị klas dị elu
Azụrụ m otu n'ime pọmpụ ndị a ma nwee mmasị na ya nke ukwuu azụrụ m abụọ ọzọ maka ụlọ ịsa ahụ ndị ọzọ. Ejiri ọnụ ọnụ dị ọnụ ala ma kpochaa ụlọ ịsa ahụ m! Ngwaahịa ahụ rutere ngwa ngwa na ọdịdị magburu onwe ya. Wonderful foset M ukwuu kwadoro nke a foset!
Ọnụahịa ziri ezi ma ọ dị mfe ịwụnye. Obi dịkwa m ezigbo ụtọ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ dị mma. N'ezie ezigbo ọkpọkọ ma na-ele anya nke ọma. Mara mfe dị mfe
WOWOW Chrome ime ụlọ ịwụ ahụ Drain Assembly